Home » Serivisy fampandrenesana tariby » Mizara fanantenana ny amin'ny ho avy ny tanora mpanatontosa sarimihetsika ho an'ny tanora
bherc fahasamihafana fetin'ny tanora
Manohitra ny fetran'ny Pandemie, manatratra ny fanjakana sy ny ranomasina ny mpamorona horonantsary mba hamoronana fatorana ara-kolontsaina, ary mizara fanantenana ho an'ny sarimihetsika mamiratra amin'ny ho avy.
Fetibe tsy mampino! Sarimihetsika mahavariana! Ny Fetiben'ny Sarimihetsika momba ny Diversity ho an'ny tanora dia tena tsara tokoa. Nahita horonantsary mahaleo tena mahafinaritra izahay ary nianatra zavatra betsaka avy amin'ny mpanatontosa sarimihetsika hafa. Mahagaga tokoa! ”
LOS ANGELES, CA, US, 29 Janoary 2021 /EINPresswire.com/ - The Black Hollywood Education and Resource Center (BHERC) nanambara androany ny fandaharana famaranana ny Fetiben'ny Sarimihetsika Diversity ho an'ny Tanora faha-11 (YDFF). Amin'ny iraka ampanaoviny hanaiky sy hanohana ireo talenta sy feon'ireo tanora tsy manam-paharoa amin'ny fanomezana sy fampiroboroboana an'ity sehatra hita maso ity - nentim-paharazana nentina tamin'ny vondrom-piarahamonina isan-taona ho hetsika mivantana - namarana ny fihazakazahana 2021 ny YDFF tamin'ny hetsika roa,F'inona no mitranga“Lahatsary momba ny fiaraha-mientana amin'ny horonantsary momba ny fitsaràna ara-tsosialy sy sabotsy, Sabotsy 30 Janoary, 1:00 PM (PDT) ary YDFF lanonana famaranana, Alahady 31 Janoary, 2:00 PM PDT amin'ny Internet ao amin'ny BHERC.TV.
Ny hetsika voatendry ny sabotsy 30 janoary, dia mampiseho ny famerenan'ny tsingerintaona faha-20 ny horonantsary All-Star an'ilay hira malaza Marvin Gaye tamin'ny taona 1971 mitondra ny lohateny hoe "What Are going on." Ity horonantsary novokarin'i Alcee H Walker, mpanatontosa sarimihetsika tranainy ity, Filoham-pirenena, Chasing My Dreams Film Group (CMDFG), dia manasongadina ireo tanora amin'ilay famerenanana. Rehefa nanao antso an-tariby Andriamatoa Walker dia nisy tanora avy any Georgia, Florida, Maryland, Philadelphia, North Carolina, New Jersey, New York, Connecticut, ary Rhode Island no namaly ny antso mba handray anjara amin'ity hira ity izay mampihetsi-po sy miara-miasa - vita talohan'ny nahaterahany - mbola maneho ny fahatsapan'izy ireo ny olan'ny fotoana atrehany ankehitriny rehefa mipoaka izao tontolo izao manodidina azy. Aorian'ny fandefasana ilay horonantsary dia samy handray anjara amin'ny "Making of Panel" i Sandra J. Evers-Manly, filoha sady mpanorina ny BHERC, na ny mpamokatra na ny mpilalao marobe. Hizara ny heviny momba ny fahamarinana ara-tsosialy, ny fanantenan'izy ireo ny ho avy ary ny hafatra antenain'izy ireo halefa miaraka amin'ilay horonantsary ireo mpianatra.
Chasing My Dreams Film Group (CMDFG) dia orinasa mpamokatra horonantsary miorina amin'ny ankizy izay manome fotoana ho an'ny ankizy avy amin'ny vondrom-piarahamonina samihafa amin'ny indostrian'ny sarimihetsika. Amin'ny maha mpitarika ny CMDFG azy, Alcee H. Walker dia manolo-tena amin'ny tantara izay mifantoka amin'ny olana ara-tsosialy izay mitombina ary mifandray amin'ny taranaka tanora. Ny sarimihetsika CMDFG dia ampiasaina ho fitaovana fanabeazana amin'ny alàlan'ny fanaovana fizahana any an-tsekoly sy amin'ny fanomezana drafitra lesona mifanaraka amin'ny fandaharam-pianarana momba ny fahasalamana sy ny fahasalamana. Ny CMDFG dia miezaka mamorona tantara miresaka olana ara-tsosialy izay misy akony lehibe amin'ny vondrom-piarahamonintsika. Famahana olana momba ny fianakaviana, fanagadrana, herisetra ataon'ny polisy, herisetra, ankizy any am-pianarana sy fanaovana herisetra. Ny sarimihetsika noforonin'i CMDFG dia manta sy tsy voasivana ary mikendry ny hahatonga ny mpijery tsy mahazo aina mba hahafahan'izy ireo manontany ny fomba fijeriny sy ny finoany.
Alahady 31 janoary amin'ny 2:00 hariva, ny YDFF dia hanao ny hetsika famaranana ataon'ny filoham-pirenena sy ny mpanorina ny BHERC Sandra J. Evers-Manly, ity hetsika manokana ity dia hanasongadinana ireo mpilalao sarimihetsika tanora manana talenta sy mahatalanjona voafantina avy any Etazonia sy any ivelany. iza no hizara ny fomba fijeriny sy ny fanantenany ny ho avy ary koa ny fomba ahafahan'ny fanaovana sarimihetsika manisy fiovana sy fiantraikany amin'ny tontolo manodidina azy.
Faly ny BHERC YDFF nampiantrano ny sarimihetsika miampy 60 miampy voafantina ho an'ny 2021 izay tsy mitovy amin'ny faritra iarahany sy ireo tanora mpanao horonantsary izay soloin'izy ireo anisany an'i Etazonia, ary firenena 14: ny Fanjakana Mitambatra, Kanada, Kenya, Russia, Estonia, Espana, Brezila, Aostralia, Bangladesh, Korea, Danemarka, India, Hongria, ary Iran. Nifampizara ny fomba fijerin'izy ireo tamin'ny Internet tamin'ny alàlan'ny media sosialy an-tserasera, latabatra boribory ary takelaka ireo mpilalao horonantsary. Miady hevitra momba ny fomba fanaovan-dry zareo amin'ny fanaovana sarimihetsika, ny fomba nanombohany, iza ny mpampianatra azy ary aiza no tian-dry zareo ho avy amin'ny fanaovana sary. Mifanampy sy mizara ny diany. Ho an'ny maro, niatrika lohahevitra mavesatra nanakaiky ny fony izy ireo toy ny fahamarinana ara-tsosialy, ny fahasalamana ara-tsaina, ny tsy rariny ara-pirazanana, ny horohoro, ny famonoan-tena ary ny fanaovana skateboard an-tsokosoko maivana kokoa, maniry biby fiompy, ady rap ary hatsikana. Voakasik'izany koa ireo mpijery an-tserasera. Ireto ambany ireto misy hevitra vitsivitsy avy amin'ny mpanatontosa sarimihetsika:
• Inam Inam, Villupuram, Tamil Nadu, India: “Charisma” - “Faly izahay mahita sary mihetsika mamorona mpamorona sarimihetsika manan-talenta kokoa. Io no sehatra tsara indrindra ho an'ny taranaka mandimby rehetra. ”
• Greta Kerkoff, - Mittleton, Colorado: "Leena sy Claudia" - "Nahafinaritra ny nahita olona maro hafa mitovy taona amiko izay samy manana ny fitiavany ny zavatra ataony. Ny fahaiza-mamorona sy ny fahaizan'ny tsirairay dia nanentana ahy hiroso amin'ireo tetikasako manaraka. ”
• Luis Lope, Brockton, Massachusetts: “Manantena” - “Ity festival ity dia fotoana mety hianarana sy hampianarana ny zavatra nianaranao tamin'ny mpanao sarimihetsika namanao.”
• Alexander McDaniel, Sherman Oaks, CA: "1619" sy "Bully Proof Vest" - "Amin'ny maha mpanatontosa sarimihetsika anay dia mahatsapa fahafinaretana izahay mijery ny horonantsarinay sy miresaka momba izany!"
• Evangelina Sarett, Novosibirsk, Russia, Federasiona Rosiana: “Adventure amin'ny universite mifanila” - “Fetibe tsy mampino! Sarimihetsika mahavariana! Ny Fetiben'ny Sarimihetsika momba ny Diversity ho an'ny tanora dia tena tsara tokoa. Nahita horonantsary mahaleo tena mahafinaritra izahay ary nianatra zavatra betsaka avy amin'ny mpanatontosa sarimihetsika hafa. Mahagaga tokoa, misaotra! ”
• Beatriz Velloso, Vieira de Ouro Filmes, Sao Paolo Brazil: "Ny diariko amin'ny faran'izao tontolo izao: Football Edition" - "Izaho sy ny olona rehetra ao amin'ny ekipa, faly tokoa izahay mandray anjara amin'ity festival mahafinaritra ity. Nijery ny sarimihetsika sy ny efitrano fianarana rehetra aho. Ary latsa-dranomaso aho rehefa mahita olona liana amin'ny kanto. Mampiseho amintsika ny fahasamihafana ara-kolontsaina mahafinaritra, ary olombelona daholo isika. Mahafantatra zavatra betsaka momba ny kolotsaina sy izay mampihetsika ny olona eto amin'ity planeta kely ity aho. Misaotra betsaka ary mitahy JESOA. Manokana indrindra aho dia mandefa famihinana ho an'ireo Breziliana izay eto koa. Tiako ny hahafantatra. ”
Ny BHERC dia manasa ny tanora, mpikambana ao amin'ny fiarahamonina sy ireo matihanina amin'ny indostria avy any Etazonia sy manerana an'izao tontolo izao, hanatevin-daharana antsika amin'ity festival lehibe sarimihetsika mahatalanjona an-tserasera amin'ny alahady 31 Janoary ity. Raha mila fampahalalana fanampiny momba ny BHERC sy ireo fandaharana rehetra dia tsidiho www.bherc.org.
Fampiroboroboana ny horonantsary momba ny sarimihetsika ho an'ny tanora BHERC faha-11
Kanada dia manambara fameperana fanampiny amin'ny dia iraisam-pirenena